Waxa ay xayawaankaagu ogaadaan inta aanad ogaanin | Bezzia
Waxa ay xayawaankaagu ogaadaan ka hor intaadan ogaanin
Ma taqaan wax kasta oo xayawaankaagu ogaadaan? Sababtoo ah ma aha nasiib in mararka qaarkood ay u dhaqmaan si ka duwan sida caadiga ah. Waxay u muuqataa in tiro cudurro ah ay urin karaan. Waxaan si fiican u ognahay in urta ay tahay mid ka mid ah sifooyinka wanaagsan ee xayawaanku leeyihiin, markaa halkaas ayaa ka yimaada kuwa ugu fiican.
Sababtoo ah waa run in aan soo sheegnay in cudurro la ogaado laakiin aan had iyo jeer ahayn. Xaaladaha qaarkood Waxa kale oo ay noqon doontaa war wanaagsan, in laga yaabo inaad sugto inaad maqasho oo waxay noqon doontaa xayawaankaaga kan ku ogeysiin kara. Hadda waxaad u baahan doontaa inaad u fiirsato in ka badan sidii hore dhammaan dhaqdhaqaaqyadooda!
1 Waxay Xayawaankaagu ogaadaan: Kansarka qanjirka 'prostate'
4 Cimiladu way isbedeshaa
Waxay Xayawaankaagu ogaadaan: Kansarka qanjirka 'prostate'
Waa run in ay tahay mawduuc adag halka ay ka jiraan. Laakiin waxa ay u muuqataa in ay jiraan daraasado sheegaya in laga yaabo in xayawaanku uriyaan cudurka ka hor inta aanu qofka laftiisa ogaanin jiritaankiisa. Tani Waxaa sabab u ah dareenka urta oo kobcay taas oo ah waxa lagu ogaan karo in wax ku dhacaan candhuufta ama dhididka. Inkasta oo ay faa'iido u leedahay noocyo badan oo kansar ah, waa run in mid ka mid ah kuwa eeyaha ay saxaan yihiin kansarka qanjirka 'prostate'. Waxay leeyihiin ugu yaraan boqolkiiba qaladka xoolaha.
Waxaan horeyba u sii soconaynay in dhammaantood aysan noqon doonin war xun. Sidaa darteed, waxay sidoo kale yihiin xayawaanka rabaayada ah waxay ogaan doonaan in xubin cusubi uu guriga iman doono dhawaan. Tani waxay la mid tahay kiiskii hore, tan iyo sababtoo ah urkooda waxay ogaan karaan isbeddellada hormoonnada. Sidaa darteed, laga yaabee inuu isla markaa garanayo adiga ama xitaa wax yar ka hor. Markaa had iyo jeer aad ayuu nooga warqabaa sababtoo ah nolol cusub ayaa adiga kugu jirta, sidaas oo kale, wuxuu sidoo kale rabi doonaa inuu ilaaliyo bilowga hore.
Waxaa jira kiisas bisadaha iyo eeyaha ogaan kara dhimashada. Waxay u muuqataa in dhowr sano ka hor, la helay bisad garanaysa markay waayeelku dhimanayaan oo ay ku tiirsadaan wax yar ka hor wakhtiga la gaadhay. Waa run in mar kasta oo xayawaankeena uu jiifsado macnaheedu maaha in ay wax dhacayaan, laakiin waxay la macno tahay in xaaladaha qaarkood uu urin karo. Hadda waxaan isku dayi doonaa inaanan ku mashquulin sababtoo ah xayawaankayaga laguma eedeynayo inuu haysto awoodaha taxanaha ah ee ka dhigaya xitaa mid gaar ah.
Cimiladu way isbedeshaa
Isbeddellada cimilada ugu muhiimsan sida imaatinka duufaannada ama duufaannada ayaa ka mid ah fursadaha ay xayawaanku ogaan karaan. Sababtoo ah waxay ogaanayaan in isbeddelku soo socdo iyo in ay ugu dambeyntii u horseedaan kuwa la sheegay. Eygu wuxuu u ekaan doonaa kan ugu dareenka badan ka hor inta aysan duufaantu dhicin. oo ma joojinayso in ay dhinac u dhaqaaqdo. Dabcan, xayawaankaaga rabaayada ah waxaa laga yaabaa inuu leeyahay dabeecad kale. Sababtoo ah sida caadiga ah waxay noqon doontaa wax iyaga ka bajiya oo markaa waxay yeelan karaan dabeecado kala duwan.
Marka loo eego anaga waxaan ogaan karnaa sida xayawaankeena uu yahay, xitaa in ka badan oo ka sii wanaagsan sida aan dareemeyno. Haddii aad murugaysan tahay ama aad murugaysan tahay way ogaan doonaan kamana tegi doonaan keligaa ama keligaa. Sababtoo ah waa mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee ay kuugu muujin karaan jacaylkooda. Sidaa darteed, shirkaddani had iyo jeer waa mid ka mid ah kuwa ugu daacadsan oo lagama maarmaanka u ah nolosheenna.
Mar kale waa inaan nidhaahnaa taas Weerarrada noocaan ah waxay ku xiran yihiin ur aad u gaar ah in xayawaanka kaliya ay ogaan karaan ka hor inta aysan dhicin. Markaa had iyo jeer waa feejignaan wanaagsan in la ogaado goorta ay dhacayso si looga hortago dhicitaanka iyo in qof loo digo ka hor inta uusan weerarku dhicin. Ma ogtahay wax kasta oo xayawaankaagu ogaadaan? Hadda waxa hubaal ah in aad u fiirsasho badan tahay ama aad u fiirsato dhaqdhaqaaqyadooda oo dhan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Guriga » Mascotas » Waxa ay xayawaankaagu ogaadaan ka hor intaadan ogaanin
Ka faa'iidayso iibka Pikolinos, maalgashada raaxada
Maaskaro si ay dib ugu soo nooleeyaan xuubka isha